Halkan dadku waxay inbaddan ka hadlaan galmada. Anigu waxaan ahay wiil 15-sanno-jir ah waxaana u malaynayaa in aysan qofna waxba ka galin. Maxay dadka oo dhan uga hadlaan waxyaabaha ku saabsan galmada?
Du bist hier: Startseite / Halkan dadku waxay inbaddan ka hadlaan galmada. Anigu waxaan ahay wiil...
Galmadu waa arin aad shakhsi ah.
Inbaddan oo dadka kamid ahi ma doonayaan in ay ka hadlaan.
Laakiin dhallinyaro baddan waxay qabbaan su’aalooyin.
Ayagu ma hubbaan mana ogga wax walba.
Aad ayay muhiim kuugu tahay in aad oggaatid
in ay dhici karto in aad weydiisid su’aalo.
Laakiin khasab kuguma ahan in aad qofkasta kala hadashid waxyaabaha ku saabsan galmada.
Mararka qaar way wanaagsantahay in laga hadlo.
Waxaa jira sababo baddan oo kaa dhigaya in aad ka hadashid galmada:
Dhallinyaradu waxay la kulmayaan waxyaabo baddan oo cusub.
Waxay jeclaan karaan in ay arimahaasi la wadaagaan dhallinyaro kale.
Waxay noqon kartaa mid aad xiiso u leh!
Inbadda oo kamid ah dadka waaweyn waxay ka jawaabi karaan su’aalaha ay weydiiyaan dhallinyarada.
Waxay siin karaan macluumaad
Waxay doonayaan in ay caawiyaan.
Dhallinyaradu waa in ay dareemaan in:
Ay kala hadli karaan waxyaabaha wanaagsan iyo waxyaabaha aan wanaagsanaynba dadka waaweyn.
Waxay weydiin karaan su’aalooyin ku saabsan jirkooda iyo galmada.
Waxay heli karaan caawimaad marka ay u baahdaan.
https://refu-tips.de/wp-content/uploads/AMYNA_logo_transparent_klein.png 0 0 editorialteam https://refu-tips.de/wp-content/uploads/AMYNA_logo_transparent_klein.png editorialteam2017-12-20 14:42:092017-12-20 14:42:09Halkan dadku waxay inbaddan ka hadlaan galmada. Anigu waxaan ahay wiil 15-sanno-jir ah waxaana u malaynayaa in aysan qofna waxba ka galin. Maxay dadka oo dhan uga hadlaan waxyaabaha ku saabsan galmada?